ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့် Obsessive-Compulsive Disorder အတွက်ဆုလာဘ်ကာလအတွင်း ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲခြင်း
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်ဆုကြေးရှိလာခြင်းနှင့် obsessive-compulsive Disorder (2012) ကာလအတွင်းပြောင်းလဲဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012; 7(9): e45938 ။
2012 စက်တင်ဘာလ 20 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0045938
Jung-Seok Choi,1,2 Young-Chul ရှင်,3 ကို Wi Hoon Jung,4 Joon Hwan ဂျန်,1 Do-Hyung Kang,1 chi-Hoon Choi,5 ဆမ်-Wook Choi,6 ဇွန်-Young က Lee က,1,2 jae Yeon Hwang,2,7 နှင့် ဇွန် Soo Kwon1,4,7,*
လီယိုနာဒို Fontenelle, Editor ကို
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (PG) နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ (OCD) အသီးသီးထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူအောက်ပါအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်တစ်ဦးမှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲအဖြစ် conceptualized နေကြသည်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေအဖြစ်ထပ်တလဲလဲလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မလှူဖို့စဉ်းစားနေချိန်တွင်သို့သော်ယနေ့အထိအဘယ်သူမျှမ neuroimaging လေ့လာမှုများ OCD အတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ PG အတွက်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်အဆင့်စဉ်အတွင်းဆုလာဘ် circuitry ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
နည်းလမ်းများ / ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေ့ရှိချက်
ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်အဆင့်မှတိကျတဲ့အတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများ elucidate မှကျနော်တို့ PG နှင့်အတူငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်အဖြစ်အပျက်-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့် OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်သူတို့နှင့်အတူသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်။ PG နှင့်အတူတဆယ်ငါးအထီးလူနာ OCD နှင့် 13 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 15 လူနာအုပ်စုတစ်စု-လိုက်ဖက်အသက်အရွယ်, ကျားမ, နှင့်အိုင်ကျူအဘို့, fMRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စဉ်အတွင်းတစ်ငွေကြေးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေး task ထဲမှာပါဝင်ခဲ့။ အမြတ်နဲ့အရှုံးနှစ်ခုလုံး၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventromedial caudate နျူကလိယအတွက်အာရုံကြော activation OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ PG နှင့်အတူလူနာအတွက်လျော့နည်းသွား. ထို့အပြင်ဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း anterior insula အတွက်လျှော့ချ activation OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်အကြားအလယ်အလတ်ခဲ့သည့် OCD နှင့်အတူလူနာအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ PG နှင့်အတူလူနာအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် (ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများ <PG <OCD), နှင့်အတွင်းစိတ် insula နှင့် South Oaks လောင်းကစားမျက်နှာပြင်ရမှတ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုအကြားသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်မှုကို PG နှင့်အတူလူနာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုကနေကွဲပြားခြားနားသွား PG ၏ pathophysiology ဘို့တိကျတဲ့ neurobiological အင်္ဂါရပ်ဖြစ်နိုင်သည်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventromedial caudate နျူကလိယအတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုလျော့သွားသည်။ PG လက္ခဏာတွေနဲ့အတူအရှုံးမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း anterior နောက်ကျနေခဲ့သည်လှုပ်ရှားမှု၏ဆက်စပ်မှု PG လက္ခဏာတွေဆိုးရွားအဖြစ် PG နှင့်အတူလူနာအန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းနဲ့ဆက်စပ် OCD ရဲ့ features တွေကို fit ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော PG နှင့် OCD နှင့်အတူလူနာအကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ညီမျှမှုနှင့်တူညီဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (PG) အမျိုးသားများတွင်အဓိကအားဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကြားမှဆက်လက်လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတစ်ခုမြဲပုံစံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောနာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ PG တစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲစဉ်းစားသည် ထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးမှီခိုအတူ။ obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) လည်းတစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲအဖြစ် conceptualized ထားပြီး , စွဲနေဖြင့်သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်များလျှော့ချရေးအောက်ပါအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ OCD ၌၎င်း, မလှူစွဲလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်နိုင် .
PG နှင့် OCD အတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအကျိုးကိုစနစ်၏အလုပ်မဖြစ်ဖြစ်စဉ်ကိုသူနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ အကျိုးကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ ventral striatal-orbitofrontal circuitry အပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည် ။ သို့သော်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်အကြားတစ်ဦး functional dissociation ထက်တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းဆုလာဘ်ဆားကစ်၏သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် ။ ကျန်းမာဘာသာရပ်များမှာ ventral striatum မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ပါတယ်နှင့် medial prefrontal နှင့် orbitofrontal cortex (OFC) အပါအဝင် prefrontal ဒေသ, အမှန်တကယ်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန် သာ. ကြီးမြတ် activation ပြသသော်လည်းအဆိုပါ anterior insula, အရှုံးမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့် activated ဖြစ်ပါတယ် , ။ ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲ, Beck et al အတွက်ချွတ်ယွင်းဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့မှလေးစားမှုနှင့်အတူ။  အထီးအရက်သမားကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်မှဆွေမျိုးငွေကြေးအမြတ်များ၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventral striatum ၏လျှော့ချ activation ပြသသောသတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံးငွေကြေးဆုလာဘ် gradations တုံ့ပြန်ထဲမှာ, OFC အပါအဝင် corticolimbic ဆုလာဘ်ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင်လျှော့ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ကို Activation, သရုပ်ပြ ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, OCD နှင့်အတူလူနာ ventral striatum ရဲ့အစိတ်အပိုင်းသည်နျူကလိယ accumbens အတွက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားပြသ ။ ယခင်အစီရင်ခံစာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုသည် OCD အတွက်အနုတ်လက္ခဏာတွေကိုမှမွငျ့မား sensitivity ကိုရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များ, ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်မှ OCD ဆွေမျိုးနှင့်အတူလူနာအတွက်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း anterior insula ၏တိုးမြှင့် activation ထင်ရှား ။ PG နှင့်အတူလူနာအများအပြားကလေ့လာမှုများကဤတစ်ဦးချင်းစီ၏အကျိုးကိုစနစ်များအတွက်မူမမှန်တွေ့ပြီ။ Reuter et al ။  PG ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲမှာတွေ့ရှိသည်ဟုအလားတူလှုံ့ဆော်မှုဆုချမယ့်တုံးတုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းအကြံပြုငွေကြေးဆုလာဘ်တုံ့ပြန်အတွက်နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ဆားကစ်၏လျှော့ချ activation သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကက de Ruiter et al ။  ပိုက်ဆံရရှိခဲ့သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်အခါ ventrolateral prefrontal cortex ၏ hypoactivation အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ် PG, တုံ့ပြန်မှုဇွဲနဲ့မှိန်ဖျော့ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ် sensitivity ကိုမှဆက်စပ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေဆုလာဘ်, Balodis et al ၏ရလဒ်ကိုကြည့်ရှုနေစဉ်။  တွေ့ရှိခဲ့ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းနှင့်အရှုံးမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း anterior insula အတွက် ventral striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုလျော့သွားသည်။
ထပ်တလဲလဲလောင်းကစားဝိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့် PG နှင့် OCD အတွက် neurobiological အင်္ဂါရပ်များစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုနားလည်ဘို့အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းငှါ, အဖြစ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ compulsion ။ ယနေ့အထိသို့သော်အဘယ်သူမျှမ neuroimaging လေ့လာမှုများ OCD အတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ PG အတွက်ဆုလာဘ် circuitry စုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ ဒါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရွေးချယ်မှုနှင့်အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ, အဖြစ်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်, ကျနော်တို့ကငွေကြေးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးတာဝန်လျှောက်ထား  PG နှင့်အတူလူနာအကြားတစ်ဦးဆုလာဘ်ခွအေနအေ၏မျှော်လင့်အဆင့်မှတိကျတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု elucidate မှအဖြစ်အပျက်-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ၏စကားစပ်နှင့် OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာသူတို့နှင့်အတူရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်။ ဤလေ့လာမှု၌, PG အတွက်ဆုချမှလျော့အပြုသဘောဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ် sensitivity ကိုညွှန်ပြယခင်အစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ PG နှင့်အတူလူနာပြသမယ်လို့တွေးဆကျန်းမာအတွက်သူတို့အားအမြတ်နှင့်အရှုံးဆွေမျိုးနှစ်ဦးစလုံး၏မျှော်လင့်အဆင့်စဉ်အတွင်း ventral striatum အတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများလျော့နည်းသွား ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် PG အတွက်လှုပ်ရှားမှုများလျော့နည်းသွား OCD ရှိသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်သူတို့အားအရှုံးဆွေမျိုးများ၏မျှော်လင့်အဆင့်စဉ်အတွင်း PG နှင့်အတူလူနာအတွက်လျော့နည်းသွား anterior နောက်ကျနေခဲ့သည်လှုပ်ရှားမှုများတွေ့ရှိရန်မျှော်လင့်ထား။
ကျနော်တို့လှုံ့ဆော်မှုဆုချဖို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက် PG နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအတွက်မြင်သာထင်သာအထီးပျံ့နှံ့ဖေါ်ပြခြင်းတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးဒီလေ့လာမှုမှာသာအထီးဘာသာရပ်များပါဝင်သည့် -။ PG ၏အကျိုးခံစားခွင့်စနစ်တွင်အစောပိုင်း ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြရန်နာမကျန်းမှုကြာချိန်မှာ (၅) နှစ်ရှိသော PG ရှိသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူကြီးများလည်းပါ ၀ င်သည်။
ဒီလေ့လာမှုကဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်းထဲမှာဖော်ပြအခြေခံမူအရသိရသည်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ Kangbuk Samsung က Medical Center မှာနဲ့ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုပျဉ်ပြားလေ့လာမှု protocol ကိုအတည်ပြုအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဘာသာရပ်များကြိုတင်ပါဝင်မှုဖို့အသိပေးသဘောတူညီချက်ပုံစံကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ဆယျ့ငါးအထီး PG (အသက်, 27.93 ± 3.59 နှစ်) နှင့်အတူလူနာ 15 အသက်အရွယ်နှင့်အိုင်ကျူ-လိုက်ဖက်ကျန်းမာအထီးထိန်းချုပ်မှု (အသက်, 26.60 ± 4.29 နှစ်), နှင့် OCD (အသက်, 13 ± 24.92 နှစ်) နှင့်အတူ 6.92 အထီးလူနာစာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ ယခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုသည် OCD ၏ဆုလာဘ်စနစ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများအပေါ် fMRI လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည် ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတော့ OCD နှင့်အတူသာအထီးဘာသာရပ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်အစီရင်ခံစာမှဆင်းသက်လာခဲ့သည်  PG ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူသူတို့အားလိင်ကိုက်ညီသော။ လူနာ Kangbuk Samsung ကဆေးရုံနှင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ, ဆိုးလ်မြို့ရဲ့ပြင်ပလူနာဆေးခန်းကနေစုဆောင်းတောင်ကိုရီးယားနှင့် PG သို့မဟုတ် OCD ၏ diagnoses DSM-IV (SCID) အတွက်ပုံစံချထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူးအပေါ်အခြေခံပြီးကြ၏ ။ PG ၏ရောဂါကိုလည်း (SOGS) ရမှတ်≥5တစ်တောင်သပိတ်လောင်းကစားဖန်သားပြင်နှင့်အတူလူနာတွေအတွက်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ ။ ပညာရေးအဆင့်ကိုမသိသိသာသာခြားနားချက်သုံးခုအုပ်စုများအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များအတွက် PG အုပ်စုတွင်တဦးတည်းမှတပါးအဘယ်ညာသန်ခဲ့ကြသည်။ လက်တွေ့အကဲဖြတ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်ယေးလ်-Brown က obsessive compulsive စကေး (PG-YBOCS) ပါဝင်သည်  PG လက္ခဏာပြင်းထန်မှု, obsessive compulsive လက္ခဏာတွေ၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာများအတွက် YBOCS, အ Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory (BDI) တိုင်းတာရန်  စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ, နှင့် Beck တော့ပူပန် Inventory (Bai) အတွက်  စိုးရိမ်စိတ်လက္ခဏာတွေပါ။ PG နှင့် OCD နှစ်ဦးစလုံးအတွက် BDI ရမှတ် 15 အထက်တွင်ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမလူနာ SCID အားဖြင့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါရောဂါခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ OCD အုပ်စု, 10 လူနာ comorbidity လက်မှလွတ်ကြ၏, အောက်ပါပုံမမှန် comorbid ခဲ့ကြသည်: နေကြပါပြီရောဂါ (N ကို = 1), obsessive-compulsive ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ (N ကို = 1), နှင့် schizotypal ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ (N ကို = 1) ။ အဆိုပါ PG အုပ်စုတွင်မရှိ, လူနာ comorbidities ရှိခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်း / သန့်ရှင်းရေး (N ကို: အပြင်, OCD နှင့်အတူလူနာအောက်ပါ Subtype သို့ခွဲခြားခဲ့သည် = 5), ကျူးကျော် / N ကို (စစ်ဆေးနေ = ဘာသာရေး / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 6), (N ကို = 1), နှင့် symmetry / သာသနာကို (N ကို = 1) ။ OCD နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမလူနာမျိုးကွဲ hoarding ခဲ့သည်။ PG (N ကိုအောက်ပါအတိုင်းဆေးလိပ်သောက်၏ status ခဲ့သည် = 7), OCD (N ကို = 6), နှင့်ထိန်းချုပ်မှု (N ကို = 8) ။ အုပ်စုများအကြားဆေးလိပ်သောက်၏ status မသိသိသာသာခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်။
ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းကနေစုဆောင်းနှင့်မည်သည့်စိတ်ရောဂါရောဂါမရှိသမိုင်းရှိခဲ့ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များအဘို့ဖယ်စံသိသိသာသာခေါင်းကိုဒဏ်ရာ, အရက်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, ဖမ်းဆီးရမိရောဂါနှင့် psychotic ရောဂါ၏သမိုင်းခဲ့ကြသည်။
အားလုံးသင်တန်းသားများကိုအကဲဖြတ်သည့်အချိန်တွင်ရင်တော့မှားမယ်ဆေးခဲ့သညျ။ အဆိုပါ Wechsler အရွယ်ရောက်ထောက်လှမ်းရေးစကေး၏ကိုရီးယားဗားရှင်းအိုင်ကျူခန့်မှန်းဖို့အားလုံးကိုဘာသာရပ်များမှအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ Knutson et al အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအဆိုပါငွေကြေးမက်လုံးပေးတာဝန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ။ ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့အလုပ်တခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည် ။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးစဉ်အတွင်းဘာသာရပ်များသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှု, သို့မဟုတ်လုံးဝမငွေကြေးဆိုင်ရာရလဒ်ကိုရှောင်ရှား, ပိုက်ဆံအနိုင်ရဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြသုံးတွေကို (cue ကြာချိန်, 350 ms) ၏တဦးတည်းရှုမြင်ကြသည်။ အဆိုပါ cue ပြီးနောက်သူတို့အချိန်တစ် variable ကိုအရှည်အဘို့ပေါ်ထွန်းသောကြောင့်အဖြူရောင်ပစ်မှတ်စတုရန်းအပေါ်တုံ့ပြန်သည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်မီတ variable ကိုကြားကာလ (နှောင့်နှေးကြာချိန်, 4180-4480 ms) အတွက်စောင့်ဆိုင်းအဖြစ် crosshair အပေါ် fixated ပါဝင်သူ (200-, ကြာချိန်ပစ်မှတ်ထား 500 ms) ။ တုံ့ပြန်ချက် (ဆိုလိုသည်မှာရလဒ်ကို, ကြာချိန်အတွက် 1500 ms) ပစ်မှတ်၏ပျောက်ဆုံးမှုအောက်ပါသူတို့ရှေ့ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းပိုက်ဆံအနိုင်ရသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရှိမရှိသင်တန်းသားများကိုအသိပေးနှင့်၎င်းတို့၏အနိုင်ရရှိတဲ့တင်ပြခဲ့သည်။
အလားအလာရှိသည့်အမြတ်၊ အလားအလာရှိသည့်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရလဒ်များကိုညွှန်ပြသည့်အရာများကိုအနီရောင်၊ အပြာနှင့်အဝါရောင်စက်ဝိုင်းများဖြင့်အသီးသီးရည်ညွှန်းသည်။ ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင်လောင်းကြေးငွေပမာဏသည်ကိုရီးယားဝမ် ၁၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာ) ဖြစ်သည်။ အချက်သုံးချက်ကို Pseudo- ကျပန်း ၅.၁၇ မှ ၉.၈၅ ့ကြားကကြားဖြတ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဖြင့်ကွဲလွဲတဲ့ fixhair ပုံစံဖြင့်တင်ပြထားပါတယ်။ MRI စစ်ဆေးခြင်းမပြုမီသင်တန်းသားများအားလုံးသည်လေ့လာမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအနိမ့်ကျစေရန်နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏တုံ့ပြန်မှုအချိန် (RT) ကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန်အတွက်အခက်အခဲများကိုစံသတ်မှတ်ရန်အတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်မပေးရသေးသောအတိုချုပ်အလေ့အကျင့်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း RT ကို MRI စစ်ဆေးစဉ်ပထမစမ်းသပ်မှုတွင်ပစ်မှတ်ထိတွေ့မှုကြာချိန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပစ်မှတ်သက်တမ်းသည်မှန်ကန်သောတုန့်ပြန်မှုနောက်လာမည့်စမ်းသပ်မှုတွင် ၃၀ ms အထိလျော့နည်းသွားပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်မမှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုပြီးနောက် ၄၀ ms အထိတိုးလာသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် PG, OCD နှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများတွင်အောင်မြင်မှုနှုန်းသည် ၅၇.၂၇%၊ ၅၄.၄၈% နှင့် ၅၈.၀၈% အသီးသီးရှိသည်။စားပွဲတင် 1) ။ သင်တန်းသားများကိုတာဝန်ဖျော်ဖြေပွဲစဉ်အတွင်းအနိုင်ရငွေကို၎င်းတို့၏စုပေါင်းစုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
MR စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့တစ် 1.5 တက်စလာ Scanner (Siemens, AVANTO, မြူးနစ်, ဂျာမနီ) ရက်နေ့တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ နှစ်ဆယ်ငါး axial ချပ်တစ် gradient ကို-ပဲ့တင်သံပဲ့တင်သံပြိုပုံရိပ် (EPI) sequence ကို (TE / TR, 52 / 2340 ms သုံးပြီးရယူကြသည် ဟူ. ၎င်း, FOV, 220 × 220 မီလီမီတာ2; အက်ဖ်အေ, 90 °, 3.44 × 3.44 ×5မီလီမီတာ3, ကြားညှပ်, အဘယ်သူမျှမ interslice ကွာဟမှု); ကျနော်တို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကပ်လျက်ချပ်ကနေ signal ကိုညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ anterior-posterior commissure လေယာဉ်မှစင်ပြိုင်တစ်ခုကြားညှပ်အချပ်-ဝယ်ယူပုံစံစုဆောင်း။ functional ပုံရိပ်တွေတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်ပြေးနှုန်း 538.2 volumes ကိုအတွက်ရရှိလာတဲ့, 245 ့တစ်ဦးချင်းစီ၏နှစ်ခုပြေးအတွက်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ high resolution T1 မာန်တင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI ပုံရိပ်တွေ (MPRAGE, TR, 11.6 s ကို; TE, 4.76 ms; FOV, 230 မီလီမီတာ; အက်ဖ်အေ, 15 °; 208 ချပ်, 0.45 × 0.45 × 0.9 မီလီမီတာ3) လည်းခန္ဓာဗေဒရည်ညွှန်းတစ်ခုချင်းစီကိုဘာသာရပ်များအတွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ Stimuli များသည် LCD projector ကိုအသုံးပြုပြီးဘာသာရပ်၏ခြေထောက်တွင်တည်ရှိသည့်စတုဂံမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ပြန်လည် projected ပြီး head coil နှင့်တွဲနေသော periscope မှန်မှကြည့်ရှုသည်။ လက်ျာလက်ညှိုးဖြင့် MRI နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော Mouse ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပစ်မှတ်များမှပစ်မှတ်များကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
functional MRI အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ဒေတာများကိုစာရင်းအင်း parametric မြေပုံဆော့ဖ်ဝဲကို (SPM8, Imaging ကအာရုံကြောသိပ္ပံ, လန်ဒန်၏ Wellcome ဦးစီးဌာန, ဗြိတိန်) သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ EPI ပုံရိပ်တွေ၏ပထမဦးဆုံးသုံး volumes ကိုကြောင့်သံလိုက်မတည်ငြိမ်မှုမှစွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ EPI ပုံရိပ်တွေ (voxel အရွယ်အစား3×33 မီလီမီတာ×သည် Montreal Neurology Institute ကရည်ညွှန်းသည်ဦးနှောက်မှ Spatial Normal, ရှာမှီးသောကာလ၌ကွဲပြားမှုအဘို့အတညျ့ realigned ခဲ့ကြသည်3), တစ်ဦး 4-s ကို cut-off နှင့်အတူ filtered တစ်ခု isotropic 128-မီလီမီတာ Full-width ကိုဝက်အများဆုံး Gaussian kernel ကို, high-pass ကို အသုံးပြု. ပန်းခင်းလမ်း။ ပုံရိပ်တွေ preprocessed ခဲ့ကြသည်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံး-Level ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအထွေထွေ linear မော်ဒယ်အညီကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများ (အလားအလာအမြတ်, အလားအလာအရှုံးနှင့်အဘယ်သူမျှမရလဒ်ကိုညွှန်းတွေကို) မော်ဒယ်အားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်အပေါ်ဖျော်ဖြေပြီး canonical hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုအတူ convolved ခဲ့သည်။ လပ်ြရြားမြ parameters များကိုကိုလည်းစာရင်းအင်းမော်ဒယ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသက်ဆိုင်ရာထူးခွားသညျ့ခဲ့ကြသည်: အမြတ်မျှော်လင့်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့မ-ရလဒ်ကို cue vs. အမြတ် cue နှင့်အရှုံး cue မရလဒ်ကို cue vs. အရှုံးမျှော်လင့်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့။ တစ်ဦးကအတွင်း-အုပ်စုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးအကြား-အုပ်စုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမြတ်နှင့်အရှုံးမျှော်လင့်များအတွက်ဆနျ့ကငျြဘပုံရိပ်တွေများအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအကြား-အုပ်စုတစ်စုကို Activation ၏ရလဒ်များကိုအတွက်တင်ပြကြသည် ဇယား2နှင့် and3.3။ ကျနော်တို့တစ်ခုံကိုအသုံးပြု P<0.05, မိသားစုပညာရှိအမှား (FWE) သည်အုပ်စုတစ်ခုစီတွင် ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးကိုစစ်ဆေးခြင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ် (ဥပမာ ventral striatum) ၏ activation ပြွတ်များကိုအတည်ပြုရန်ပြင်ဆင်သည်။ အုပ်စုအကြားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုစံသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြု၍ တင်ပြခဲ့သည် P<0.001, မမှန်ကန်သော, စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား≥7 (189 μl)၊ P<0.05 AFNI တွင် AlphaSim ကဆုံးဖြတ်အဖြစ် (http://afni.nih.gov/afni/docpdf/AlphaSim.pdf) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်အစီရင်ခံစာကိုလည်းမမှန်သောလက္ခဏာများ၏ထောက်လှမ်းကာကွယ်တားဆီးဖို့အမိန့်၌ဤတံခါးခုံကိုဖော်ပြထား .
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (PG) တို့တွင်အဘယ်သူမျှမအမြတ်သာရှိပြီးပြည်ပမှအမြတ်၏မျှော်လင့်, obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုစဉ်အတွင်း activation ၏သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ဖေါ်ပြခြင်းကဦးနှောက်ဒေသများ။
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (PG) တို့တွင်အဘယ်သူမျှမဆုံးရှုံး obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်ဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း activation ၏သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ဖေါ်ပြခြင်းကဦးနှောက်ဒေသများ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့က ventromedial caudate နျူကလိယကို (ventral striatum ရဲ့အစိတ်အပိုင်း) နှင့် anterior insula အတွက်အကျိုးစီးပွားဒေသများ (ROIs, 5-မီလီမီတာအချင်းဝက် spheres ကို) ရွေးချယ် Marsbar software ကိုသုံးပြီးတစ်ဦးချင်းစီရွယ်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီယုတ်ဆနျ့ကငျြဘတန်ဖိုးများကိုတွက်ချက် (http://marsbar.sourceforge.net) ။ ကျနော်တို့လက်တွေ့ variable တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှုစူးစမ်းနှင့် ROI ဆိုလို Pearson ရဲ့ဆက်စပ်မှုကိုအသုံးပြု။ ဆနျ့ကငျြဘတန်ဖိုးများ။
လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့ PG နှင့်အတူလူနာအကြား variable တွေကို, OCD နှင့်အတူလူနာနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု၏နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦး ANOVA သုံးပြီးကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Two-အမြီးကြီးနှင့်အရေးပါမှုမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် P
အသက်အရွယ်, ပညာရေး, အိုင်ကျူသို့မဟုတ် Bai ရမှတ်မရှိသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (ထိုအုပ်စုသုံးစုအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်စားပွဲတင် 1) ။ သို့သော် PG နှင့် OCD နှင့်အတူသူတို့နှင့်အတူလူနာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များလုပ်ခဲ့တယ်ထက် BDI အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များပြသခဲ့တယ်။ OCD နှင့်အတူလူနာ (PG နှင့်အတူလူနာလုပ်ခဲ့တယ်ထက်နာမကျန်းအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောစတင်ခြင်းတစ်ပိုရှည်ကြာချိန်ပြသF = 18.62, P<0.01; F = 26.89, P<0.01, အသီးသီး) ။
အမူအကျင့်ဒေတာနှငျ့ ပတျသကျ. မရှိသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (ထိုအတောအတွင်းထိမှန်မှုနှုန်းများအတွက်သုံးအုပ်စုများအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်F = 1.93, P = 0.16), ယုတ် RT ကို (F = 1.64, P = 0.21), သို့မဟုတ်ရရှိခဲ့ပိုက်ဆံပမာဏကို (F = 1.44, P = 0.25) (စားပွဲတင် 1).
အလားအလာအမြတ်၏မျှော်လင့်စဉ်အတွင်းအားလုံးအဖွဲ့များ ventral striatum အတွက်သိသာထင်ရှားသော activation, တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ occipital cortex ပြသခဲ့သည်။ PG နှင့်အတူလူနာများ၏ ventral striatum အတွက် activation ၏အတိုင်းအတာ OCD နှင့်အတူကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လူနာများအတွက်သူများထက်လျော့နည်းခဲ့သည်။ ဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်စဉ်အတွင်းမရှိသိသာတက်ကြွစွာ PG အုပ်စုတစ်စုအတွက် ventral striatum အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါအကြား-အုပ်စုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, PG နှင့်အတူလူနာအမြတ်၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း OCD နှင့်အတူလူနာလုပ်ခဲ့တယ်ထက် caudate နျူကလိယ၏ ventromedial အစိတ်အပိုင်းအတွက်လျော့နည်း activation အဖြစ်အလယ်တန်းတိုကျရိုကျ gyrus နှင့် occipital cortex ပြသခဲ့သည်။ PG နှင့်အတူလူနာ OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာဖို့ thalamus ဆွေမျိုးအတွက်လျှော့ activation ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ BOLD signal ကိုမစာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှု (အမြတ်၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာကြားကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 1) ။ ကျနော်တို့ရွယ် activation အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအတည်ပြုပေးဖို့ caudate နျူကလိယ၏ ventromedial အစိတ်အပိုင်းအတွက်လေ့လာဆန်းစစ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို (ventromedial caudate နျူကလိယထဲတွင်ရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုပြောင်းလဲမှုများအတွက်သုံးအုပ်စုများအကြားသိသာထင်ရှားသောအကြား-အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုတွေ့F2, 40 = 10.02, P<0.001) ။ တစ် ဦး က post hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ PG နှင့်အတူလူနာအတွက် activation OCD နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာဆွေမျိုးအဆိုပါ ventromedial caudate နျူကလိယအတွက်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် OCD ရှိလူနာများနှင့်ဤဒေသရှိကျန်းမာသန်စွမ်းသောထိန်းချုပ်မှုများအကြားသိသိသာသာခြားနားမှုမတွေ့ရပါ (သဖန်းသီး။ 2).
ဖော်ပြထားတာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆုံးရှုံးမှုအမြတ်နှင့်မျှော်လင့်၏မျှော်လင့်တုံ့ပြန်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုကြားတွင်မြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် Group မှခြားနားချက်များ, PG နှင့် OCD ( P<0.005, တူညီတဲ့စပျစ်သီးပြွတ်အဆင့် 15) ။
ရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုကြားတွင်မျှော်လင့်များ၏အဆင့်ကာလအတွင်းရွေးချယ်ထားသောဦးနှောက်ဒေသစသောအပြောင်းအလဲရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (PG) နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ (OCD) တွင် Group မှခြားနားချက်များ။
ဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်စဉ်အတွင်း PG နှင့်အတူလူနာ OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်ရန် ventromedial caudate နျူကလိယဆွေမျိုးထဲမှာသိသိသာသာလျော့နည်း activation ပြသခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, anterior insula ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် putamen နှင့် caudate နျူကလိယတိုးမြှင် activation (ကျန်းကျန်းမာမာထိန်းချုပ်မှုမှ OCD ဆွေမျိုးနှင့်အတူလူနာ၌တွေ့သဖန်းသီး။ 1) ။ အဆိုပါရွယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (အရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုပု ventromedial caudate နျူကလိယအတွက်ပြောင်းလဲမှုနှင့် anterior insula များအတွက်သုံးအုပ်စုများအကြားသိသာထင်ရှားသောအကြား-အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုပြသF2, 40 = 17.49, P<0.001 အဆိုပါ ventromedial caudate နျူကလိယအတွက်; F2, 40 = 10.19, P<0.001 ဟာ anterior insula အတွက်။ တစ် ဦး က post hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုလည်း ventromedial caudate နျူကလိယ activation OCD နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်ဆွေမျိုး PG နှင့်အတူလူနာအတွက်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ OCD နှင့်အတူလူနာ PG နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်ဆွေမျိုးဟာ anterior insula အတွက် activation တိုးမြှင့်ပြသခဲ့သည်။ PG အုပ်စု၏အတွင်းပိုင်း insula တွင်အချက်ပြမှုအပြောင်းအလဲသည် OCD နှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်အုပ်စုများကြားရှိအလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။သဖန်းသီး။ 2).
အမူအကျင့် / လက်တွေ့ variable တွေကိုနှင့်ဦးနှောက်ကို Activation အကြားဆက်စပ်မှု
ကျနော်တို့ဆုံးရှုံးမှုများမျှော်လင့် (r ကိုစဉ်အတွင်း PG နှင့်အတူလူနာအတွက် anterior insula နှင့် SOGS ရမှတ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုအကြားသိသာထင်ရှားသောအပြုသဘောဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ = 0.64, P = 0.02) (သဖန်းသီး။ 3).
အရှုံးမျှော်လင့် (r ၏အဆင့်စဉ်အတွင်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (PG) နဲ့လူနာအတွက် anterior insula နှင့်တောင်သပိတ်လောင်းကစားမျက်နှာပြင် (SOGS) ရမှတ်အတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်ဆံရေး = 0.64, p = 0.02) ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့, ဒီ OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူရှိသူများအနေဖြင့်ပုံမှန် PG နှင့်အတူလူနာအတွက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကို elucidate မှပထမဦးဆုံးဖြစ်ရပ်-ဆက်စပ် fMRI လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အမြတ်နဲ့အရှုံးနှစ်ခုလုံး၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventromedial caudate နျူကလိယထဲမှာ activation OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ PG နှင့်အတူလူနာအတွက်လျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း anterior insula အတွက်လျှော့ချ activation OCD နှင့်အတူလူနာအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ PG နှင့်အတူလူနာအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်, ထို anterior insula နှင့် SOGS ရမှတ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုအကြားသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်မှု PG နှင့်အတူလူနာအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, ငါတို့ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ PG နှင့်အတူလူနာအတွက်ဆုံးရှုံးမှုအမြတ်နှင့်မျှော်လင့်နှစ်ခုလုံးမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventromedial caudate နျူကလိယ၏လျော့ချ activation တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ventromedial caudate နျူကလိယဟာ ventral striatum ရဲ့အစိတ်အပိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီး , , အရာပြင်းပြင်းထန်ထန် dopaminergic အမျှင်များက innervated ဖြစ်ပါတယ်။ Dopamine ဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်အပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။ စွဲလမ်း၏ pathophysiology မှဗဟိုဖြစ်နိုင်သည်သော dopaminergic mesolimbic circuit ကို, ထိုကဲ့သို့သောဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus နှင့် ventral striatum အဖြစ် subcortical ဒေသများနှင့်ထိုကဲ့သို့သော medial prefrontal cortex အဖြစ် cortical ဒေသများနှစ်ဦးစလုံးအပါအဝင် midbrain အာရုံခံထံမှ dopaminergic စီမံကိန်းများ, အထူးသဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာအားလက်ခံတွေ့ဆုံ .
PG အတွက် ventral striatum ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်သက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည်။ PG နှင့်အတူလူနာ simulated လောင်းကစားဝိုင်းစဉ်အတွင်း ventral striatum ၏လျော့နည်း activation ပြသ ။ သို့သော်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ် differential ကွဲပြားဦးနှောက်ဒေသများစုဆောင်းလိမ့်မည်။ ဆုလာဘ်၏ရလဒ် ventromedial တိုကျရိုကျ cortex မြှင့်လုပ်ဆောင်သော်လည်းအကြောင်း, ဆုလာဘ်များမျှော်လင့် ventral striatum မြှင့်လုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါသည် , , ။ မကြာသေးမီက PG နှင့်အတူလူနာဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventral striatum အတွက်လျှော့လှုပ်ရှားမှုပြ ။ တစ်ဦးကယခင်ပေလေ့လာမှု ventral striatum အတွက် dopamine ၏လွှတ်ပေးရန်ဆုလာဘ်၏မြော်လင့်ခြင်းမှမဟုတျဘဲအကျိုးကိုသူ့ဟာသူနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် ။ ဒါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအတွေးများနှင့်အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့အလားအလာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျှော်လင့်မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့၏အရေးပါသောအဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုတယ် ။ ထို့ကြောင့်, PG နှင့်အတူလူနာအတွက်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventromedial caudate နျူကလိယအပါအဝင်တစ် hypoactive ventral striatum တစ် hypo-dopaminergic ပြည်နယ်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူများအတွက်အန္တရာယ်မြင့်ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များဆုလာဘ် sensitivity ကို, ယုတ်လျော့စေနိုင်သည်။ ဆနျ့ကငျြ, ဗန် Holst et al ။  ထိန်းချုပ်မှုမှ PG ဆွေမျိုးများ၏ striatum အတွက်တိုးချဲ့ဆုလာဘ်မျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ coding တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗန် Holst et al ။  လက်ရှိနှင့် Balodis et al များတွင်အသုံးပြုနေမတူညီတဲ့ခဲ့သည့် fMRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့, စဉ်အတွင်းတစ်နောက်ဆုံးတွင်ခန့်မှန်းကဒ်တာဝန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ဦး နှောက်၏လှုပ်ရှားမှုသည် cue နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲနေသည့်လူနာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဂိမ်းကစားခြင်းဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်အခါ frontal cortex၊ ။ စင်ကြယ်သောဆုလာဘ် system ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ပိုကြီးတဲ့နမူနာအရွယ်အစားနှင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်များကိုနှင့်အတူနောက်ထပ်လေ့လာမှုများသည်ဤကွဲပြားခြားနားသောတွေ့ရှိချက်များကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်နေပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆန့်ကျင်, PG ၏ ventral striatum အတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု OCD အတွက်ထက်လျော့နည်းခဲ့သည်နှင့် OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအမြတ်၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventral striatum ၏နှိုင်းယှဉ် activation ပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက် OCD အုပ်စုတစ်စုလက္ခဏာအတိုင်းအတာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခဲ့ကွောငျးခနျ့မှနျးနိုငျသညျ။ Figee et al ။  အစီရင်ခံ OCD အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွား, နှင့်၎င်း၏လျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုမြင့်မားသောအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ရှိသူများထက်ညစ်ညမ်းမှုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် OCD နှင့်အတူလူနာအတွက်ပိုပြီးသိသာခဲ့ပါတယ်။ et al Figee အားဖြင့်အစီရင်ခံစာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, အပြင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက် OCD အုပ်စုသည်နာမကျန်း၏တိုတောင်းတဲ့ကြာချိန်အဖြစ်လျော့နည်းပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်သာအထီးဘာသာရပ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများလက်ရှိရလဒ်တွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်။
OCD နှင့်အတူလူနာအတွက်မှ PG ဆွေမျိုးနှင့်အတူလူနာအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း anterior insula ၏ activation လျော့နည်းသွားသည်။ PG နှင့်အတူလူနာအတွက် anterior နောက်ကျနေခဲ့သည်လှုပ်ရှားမှုသိသိသာသာကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်ထံမှကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်။ PG နှင့်အတူလူနာအတွက် anterior နောက်ကျနေခဲ့သည်လှုပ်ရှားမှု, OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်အကြားအလယ်အလတ်ခဲ့သည် အဆိုပါ insula စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အရေးပါသောဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်၎င်း၏ activation ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ၏မျှော်လင့်နှင့်ဆက်စပ်သည် ။ ထိုမှတပါး, Preuschoff et al ။  မကြာသေးမီက anterior insula ၏ activation အန္တရာယ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ခန့်မှန်းအမှားများကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်အစီရင်ခံစာ  ဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်မှ OCD ဆွေမျိုးနှင့်အတူလူနာများ၏ anterior insula အတွက်တိုးမြှင့် activation ပြသခဲ့သည်။ အထီးဘာသာရပ်များအတွက်လက်ရှိတွေ့ရှိချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကအစီရင်ခံသည်ယခင်ရလဒ်များနီးပါးဆင်တူခဲ့ကြသည် ။ ဒီအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲတွင်အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များ၏သေးငယ်တဲ့ဂဏန်းတွေနဲ့ဆက်စပ်စေခြင်းငှါ (ဎ = အထီးဘာသာရပ်များမှဆွေမျိုး 7) (ဎ = ယခင်အစီရင်ခံစာတွင် 13) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် OCD နှင့်အတူလူနာအန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူအတွက်ရရှိလာတဲ့, ဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်ဖို့ပိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဆနျ့ကငျြ, PG နှင့်အတူလူနာ OCD နှင့်အတူလူနာအတွက်မှဆွေမျိုးနောက်ကျနေခဲ့သည် activation လျော့နည်းသွားပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ကျနော်တို့ဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း PG နှင့်အတူလူနာအတွက် anterior insula နှင့် SOGS ရမှတ်၏ activation အကြားသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဆိုးရွားအဖြစ် PG နှင့်အတူငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤသည် PG နှင့်အတူလူနာအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်လျော့နည်းသွား sensitivity ကိုပြသရာယခင်အစီရင်ခံစာနှင့်အတူတသမတ်တည်းမဖြစ် ။ ယခင်လေ့လာမှုပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာသူများထက်အသက်ကြီးရှိနသောသူ PG နှင့်အတူလူနာနှင့်က de Ruiter et al အားဖြင့်အစီရင်ခံစာအတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်သည်။  ဆုလာဘ်ရလဒ်ကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ရောဂါဖြစ်စဉ်များအဖြစ်သူတို့ဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်ဖို့ hypersensitive ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ထို့ကြောင့်, PG နှင့်အတူအသက်ငယ်လူနာသက်သေအထောက်အထားဝိသေသလက္ခဏာများမှ OCD သူတို့ပိုပြီးဆင်တူပုံရသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, PG နှင့်အတူငယ်ရွယ်လူနာဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်ဖို့အထိခိုက်မခံသောတွေ့ရှိချက် OCD ရှိသူများ၌ရှိသကဲ့သို့, PG နှင့်အတူလူနာအတွက်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားစိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များထိခိုက်မှုရှောင်ရှားဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်  နှစ်ဦးစလုံး PG နှင့်အတူလူနာများနှင့် OCD ရှိသူများအတွက်ဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်ဖို့ hypersensitive နှင့်ဆက်နွယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ thalamic activation တစ်လျှော့ချရေးကိုလည်း OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြတ်၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း PG နှင့်အတူလူနာအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ thalamus အဆိုပါ ventral striatum နှင့် medial prefrontal cortex အကြားတစ်ဦးကြားခံအဖြစ်ပြုမူ , ။ အဆိုပါ thalamus နှင့် ventral striatum dopaminergic အာရုံခံခြင်းဖြင့် innervated နေကြတယ် ,  နှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေကြပြီ ။ အဆိုပါ mesolimbic ဆားကစ်၏အလုပ်မဖြစ်ဆက်သွယ်မှုအကျိုးကိုပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်း thalamus ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍထည့်သွင်းစဉ်းစား, PG နှင့်အတူလူနာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပေမည်။
ကျနော်တို့လက္ခဏာပြင်းထန်မှု, နာမကျန်း၏ကြာချိန်နှင့်စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်အပါအဝင်လက်တွေ့ variable တွေကိုအတူ ventral striatum အတွက်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုမရှိသိသိသာသာဆက်စပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပွငျ PG နှင့်အတူလူနာစတင်ခြင်းပြီးနောက်5နှစ်အတွင်း, ဆိုလိုသည်မှာ, မူးယစ်ဆေးရင်တော့မှားမယ်တို့ရောဂါစတင်ခြင်းပြီးနောက်အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ရှိကြ၏ထိုကြောင့်, ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventral striatum အတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများလျှော့ချကွဲပြားခြားနားသွား PG ၏ pathophysiology အဘို့အရိုအမှတ်အသားများဖြစ်နိုင်ပါတယ် OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုကနေ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာအကန့်အသတ်ရှိခဲ့တယ်။ နမူနာအရွယ်အစားနှင့်အထီးပါ ၀ င်သူများသာပါဝင်ခြင်းသည်ရလဒ်များကိုယေဘူယျအားဖြင့်ကန့်သတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာဆေးဝါးနှင့်ကျား၊ မရေးရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးစေသည့်အချက်များကိုထိန်းချုပ်ရန်တစ်သားတည်းဖြစ်စေသောနမူနာကိုစုဆောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် PG ၏နာမကျန်းမှုသက်တမ်းမှာ (၅) နှစ်ခန့်ရှိပြီး PG ၏ဆုလာဘ်စနစ်တွင်အစောပိုင်း ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် PG နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးကင်းသည့်လူနာများကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအမြတ်နဲ့အရှုံးနှစ်ခုလုံး၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventromedial caudate နျူကလိယအတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများဒီအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုဟာ pathophysiology များအတွက်ရိုအမှတ်အသားဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်သူတို့အား PG ဆွေမျိုးနှင့်အတူလူနာအတွက်လျော့နည်းသွားကြောင်းပြသ PG ၏။ ဆုံးရှုံးမှုများမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း, PG နှင့်အတူလူနာအတွက် anterior နောက်ကျနေခဲ့သည် activation OCD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်အကြားအလယ်အလတ်ကြီးနှင့်သိသိသာသာလက္ခဏာတွေဆိုးရွားအဖြစ် PG နှင့်အတူလူနာ OCD ရဲ့ features တွေကို fit ကြောင်းအကြံပြု, PG လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော PG နှင့် OCD နှင့်အတူလူနာအကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ညီမျှမှုနှင့်တူညီဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာသုတေသနပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့ကိုရီးယားသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာဖောင်ဒေးရှင်းမှ, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ (R31-10089) မှတဆင့်ကမ္ဘာ့အတန်းအစားတက္ကသိုလ် program ကထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
1 ။ Potenza MN (2006) မမှန် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related အခြေအနေများပါဝင်သည် addictive သငျ့သလော စွဲ 101 ပျော့ပျောင်း 1142-151 ။ [PubMed]
2 ။ Holden ကို C (2001) 'အပြုအမူ' 'စှဲ: သူတို့တည်ရှိနေပါသနည်း သိပ္ပံ 294: 980-982 ။ [PubMed]
3 ။ Denis: D, ဇော J ကို, Westenberg HG (2004) obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် dopamine များ၏အခန်းကဏ္ဍ: preclinical နှင့်လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 65 ပျော့ပျောင်း 1411-17 ။ [PubMed]
4 ။ Figee M က, Vink M က, et al က de Geus က F, Vulink N ကို, Veltman DJ သမား။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် (2011) အလုပ်မဖြစ်ဆုလာဘ် circuitry ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 69: 867-874 ။ [PubMed]
၅။ Tobler PN၊ Christopoulos GI, O'Doherty JP, Dolan RJ, Schultz W (5) လူ့အရေပြား cortex တွင်အန္တရာယ် - မှီခိုသောဆုလာဘ်တန်ဖိုးအချက်ပြ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 2009: 106-7185 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
6 ။ Knutson B, Fong သည် GW, အဒမ် CM, Varner JL, Hommer: D (2001) ဖြစ်ရပ်-ဆက်စပ် fMRI နှင့်အတူဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်၏ Dissociation ။ Neuroreport 12: 3683-3687 ။ [PubMed]
7 ။ Knutson B, Greer သည် SM (2008) Anticipatory ထိခိုက်စေ: ရွေးချယ်မှုများအတွက်အာရုံကြောဆက်စပ်နှင့်အကျိုးဆက်များ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 363: 3771-3786 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8 ။ Beck တစ်ဦးက, et al Schlagenhauf က F, Wustenberg T က, ဟိန်း J ကို, Kienast T က။ (2009) ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း Ventral striatal activation အရက်သမားအတွက် Impulse နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 66: 734-742 ။ [PubMed]
9 ။ စတိန်း RZ, et al Alia-Klein N ကို, Tomasi: D, Zhang က L ကို, ဝါဂွမ်း LA က။ (2007) ကိုကင်းစွဲထဲမှာချို့ယွင်းလှုံ့ဆျောမှုနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဆက်စပ်ငွေကြေးဆုလာဘ်မှ prefrontal cortical sensitivity ကိုယုတ်လျော့သလား နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 164: 43-51 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ Jung WH, Kang DH, ဟန် JY, ဂျန် JH, Gu BM, et al ။ obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်အတူ unmedicated လူနာအတွက်မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း (2011) ထစ်အငေါ့ ventral striatal တုံ့ပြန်မှု။ Acta Psychiatric Scand 123: 376-386 ။ [PubMed]
11 ။ Reuter J ကို, Raedler T က, နှင်းဆီ M က, လက်, ငါ Glascher J ကို, et al ။ (2005) ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နတ် neuroscience 8: 147-148 ။ [PubMed]
12 ။ et al က de Ruiter ကို MB, Veltman DJ သမား, Goudriaan AE, Oosterlaan J ကို, Sjoerds Z ကို။ (2009) တုံ့ပြန်မှုဇွဲနှင့်ဆုချခြင်းနှင့်အထီးပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် ventral prefrontal sensitivity ကို။ Neuropsychopharmacology 34: 1027-1038 ။ [PubMed]
13 ။ Balodis ထားတဲ့ IM, Kober H ကို, Worhunsky PD, Stevens MC, Pearlson GD, et al ။ (2012) ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ငွေကြေးဆုလာဘ်များနှင့်ဆုံးရှုံးမှုရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း frontostriatal လှုပ်ရှားမှုလျော့။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 71: 749-757 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ တိုးမြှင့်ငွေကြေးဆုလာဘ်၏ Knutson B ကိုအဒမ် CM, Fong သည် GW, Hommer: D (2001) ရှိလာရွေးချယ်နျူကလိယ accumbens စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ J ကို neuroscience 21: RC159 ။ [PubMed]
15 ။ Vivo အတွက်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစညျးပု striatal dopamine D1998 အဲဒီ receptor အတွက် Pohjalainen T က, Rinne Jo, Nagren K ကို Syvalahti အီး, Hietala J ကို (2) လိင်ကွဲပြားမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 155: 768-773 ။ [PubMed]
16 ။ Cloutier J ကို, Heatherton TF, Whalen PJ, ကယ်လီ WM (2008) ဆုချီးဆွဲဆောင်မှုကလူဖြစ်ပါသလား မျက်နှာဆွဲဆောင်မှုများ၏အာရုံကြောအလွှာအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ J ကို Cogn neuroscience 20: 941-951 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ Kamarajan ကို C, Porjesz B, Rangaswamy M က, တန် Y ကို, Chorlian DB, et al ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အမြတ်၏ (2009) ဦးနှောက်လက်မှတ်ပေါင်း: တစ်ခုတည်းရလဒ်ကိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ရလဒ်-related အလားအလာ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 197: 62-76 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18 ။ ပထမဦးဆုံးအကို MB, Spitzer RL, မျောက်လွှဲကျော်က M, Williams က JBW (1996) DSM-IV ဝင်ရိုးကျွန်မရောဂါများအတွက်ပုံစံချထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူး။ နယူးယောက်: နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါ Institute မှ။
19 ။ Lesieur HR, Blume SB (1987) ကတောင်သပိတ်လောင်းကစားမျက်နှာပြင် (SOGS): ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏မှတ်ပုံတင်အသစ်တစ်ခုတူရိယာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 144: 1184-1188 ။ [PubMed]
20 ။ Pallanti S က, DeCaria CM, Grant က je, Urpe M က, အယေးလ်-Brown က obsessive-compulsive စကေး (PG-YBOCS) ၏ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းလိုက်လျောညီထွေ၏ Holland အီး (2005) ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တရားဝင်မှု။ J ကို Gamble လုံး 21: 431-443 ။ [PubMed]
21 ။ Beck ကို AT, ရပ်ကွက် CH, Mendelson M က, ကဲ့ရဲ့ J ကို, Erbaugh J ကို (1961) စိတ်ကျရောဂါကိုတိုင်းတာဘို့တစ်ခုစာရင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 4: 561-571 ။ [PubMed]
22 ။ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ: Beck ကို AT, Epstein N ကို, ဘရောင်း, G, RA (1988) လက်တွေ့စိုးရိမ်စိတ်တိုင်းတာခြင်းဘို့တစ်ခုစာရင်းစတီယာရင်။ 56-893: J ကို Clin Psychol 897 နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ [PubMed]
23 ။ Drevets WC, Gautier ကို C, စျေး JC, Kupfer DJ သမား, Kinahan PE, et al ။ (2001) လူ့ ventral striatum အတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် Euphoria ပီတိတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 49: 81-96 ။ [PubMed]
24 ။ et al Brody AL, Olmstead RE, လန်ဒန် ED, Farahi J ကို, Meyer JH ။ (2004) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း-သွေးဆောင် ventral striatum dopamine လွှတ်ပေးရန်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 161: 1211-1218 ။ [PubMed]
25 ။ Nestler EJ, စွဲလမ်း၏ Aghajanian GK (1997) မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအခြေခံ။ သိပ္ပံ 278: 58-63 ။ [PubMed]
26 ။ အဆိုပါ pons အတွက်မြင့်မားသော NE အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်စိတ်ကြွဆေးမှကြားရှိ ME, Fobes JL (1981) Activity ကိုတုံ့ပြန်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 15: 167-171 ။ [PubMed]
၂၇။ O'Doherty JP၊ Deichmann R၊ Critchley HD, Dolan RJ (၂၀၀၂) အာရုံကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသည်အဓိကအရသာဆုကိုမျှော်လင့်နေစဉ်။ Neuron 27: 2002-33 ။ [PubMed]
28 ။ Knutson B, Fong သည် GW, Bennett က SM, အဒမ် CM, Hommer: D (2003) mesial prefrontal cortex ပုဒ် monetarily ကြိုးရလဒ်များတစ်ဒေသ: လျင်မြန်စွာဖြစ်ရပ်-ဆက်စပ် fMRI နှင့်အတူစရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Neuroimage 18: 263-272 ။ [PubMed]
29 ။ et al de la Fuentes-ဖာနန်ဒက်ဇ R ကို, Phillips က AG က, Zamburlini M က, Sossi V ကို, Calne DB ။ လူ့ ventral striatum နှင့်ဆုလာဘ်မြျှော (2002) Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 136: 359-363 ။ [PubMed]
30 ။ Knutson B, တေလာ J ကို, Kaufman က M, Peterson R ကို, ဂလိုဗာက G (2005) မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးအာရုံကြောကိုယ်စားပြုမှု Distributed ။ J ကို neuroscience 25: 4806-4812 ။ [PubMed]
31 ။ ဗန် Holst RJ, Veltman DJ သမား, Buchel ကို C, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က, Goudriaan AE (2012) ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်မျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ coding ပုံပျက်: အစွဲလမ်းဟာမျှော်လင့်ရှိပါသနည်း Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 71: 741-748 ။ [PubMed]
32 ။ ko CH, လျူ GC, Hsiao S က, ယန်း JY ယန် MJ, et al ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်း၏ဂိမ်းကစားတတ်ပြီးနှင့်ဆက်စပ် (2009) ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res 43: 739-747 ။ [PubMed]
33 ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ဖန် KL, အာမခံ T က, တေလာ SF, Liberzon ငါ (2002) Functional neuroanatomy: ပေနှင့် fMRI အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို Activation လေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်။ Neuroimage 16: 331-348 ။ [PubMed]
34 ။ Preuschoff K ကို Quartz SR, Bossaerts P ကို ​​(2008) လူ့ insula activation အန္တရာယ်ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများအဖြစ်အန္တရာယ်ထင်ဟပ်။ J ကို neuroscience 28: 2745-2752 ။ [PubMed]
35 ။ Joffe RT ကို, Bagby RM, Levitt AJ, ရီဂင် JJ, က Parker JD (1993) အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက် Tridimensional ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမေးခွန်းလွှာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 150: 959-960 ။ [PubMed]
36 ။ Lehericy S က, Ducros M က, ဗန်က de Moortele PF, et al ဆိုင်ရာ Francois ကို C, Thivard L ကို။ (2004) ပျံ့ tensor ဖိုင်ဘာခြေရာခံခြင်းလူသားတွေအတွက်ကွဲပြား corticostriatal ဆားကစ်ပြသထားတယ်။ အမ်း Neurol 55: 522-529 ။ [PubMed]
37 ။ Draganski B, Kherif က F, Kloppel S က, ကွတ် PA ဆိုပြီးအလက်ဇန္ဒား, DC, et al ။ လူ့ Basal Ganglia အတွက်အသားအရောင်ခွဲခြားနှင့် Integrated ဆက်သွယ်မှုပုံစံများများအတွက် (2008) အထောက်အထား။ J ကို neuroscience 28: 7143-7152 ။ [PubMed]
38 ။ Knutson B, Bjork JM, Fong သည် GW, Hommer: D, Mattay VS, et al ။ (2004) ဖက်တမင်းဆေးပြားလူ့မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့ modulates ။ အာရုံခံဆဲလျ 43: 261-269 ။ [PubMed]
39 ။ ယင်းဟာ Macaque နှင့်လူ့ thalamus အတွက် dopamine innervation ၏ Garcia က-Cabezas MA, ရီ B, Sanchez-Gonzalez, MA, Cavada ကို C (2007) ဖြန့်ဖြူး။ Neuroimage 34: 965-984 ။ [PubMed]